Ibhulashi Lesilwanyane Elimbili
Ukuqedela i-Pet Comb
Insimbi Engagqwali Pet Ikama
Isikhumba se-Pet Paw Nail
Inja Yokuhlanza Inja
Izipikili zezipikili zezilwane
Ifayela le-Pet Nail
Izinja ze-Collars ze-Dog
Ithuluzi lamaGloves Mitts Massage Bathing
Ithuluzi Lokugeza Massage
Ibhulashi lamazinyo lezilwane ezifuywayo
Ukuphepha Izinyo Descaler
Izikele Zesilwane Esifuywayo
Isethi Yesikhulisi Sezilwane
Okuphakelayo kwePet Bowl
Ibhodlela Lamanzi Ezifuywayo
Interactive Pet Amathoyizi
Izintambo Zokudlala Izilwane
Izikhwama Zenkunkuma Yezinja
Isisusi Sezinwele Ezifuywayo
Waste Izikhwama Idivaysi ekhipha
Kungani ezinye izinja zinehyper kakhulu kunezinye?
Sibona izinja nxazonke futhi ezinye zazo zibonakala zinamandla angenamkhawulo, kanti ezinye zibuyiselwe emuva. Iningi labazali bezilwane ezifuywayo liyashesha ukubiza inja yalo enamandla kakhulu ngokuthi “idlamkile,” Kungani ezinye izinja zinehaba kakhulu kunezinye? Izici zokuzala Abelusi baseJalimane, ama-Border Collies, ama-Golden Retrievers, ama-Si ...
Okuthile Okufanele Ukwazi Ngamazinyo Enja Yakho
Kunezindlala zezithukuthuku ezinyaweni zenja yakho. Izinja zikhiqiza izithukuthuku ezingxenyeni zemizimba yazo ezingamboziwe ngoboya, njengekhala namaphakethe ezinyawo zazo.Ungqimba lwangaphakathi lwesikhumba esidladleni senja luqukethe izindlala zomjuluko - ukupholisa inja eshisayo phansi. Futhi njengabantu, lapho inja inovalo noma icindezelekile, ...
Wonke umnikazi wesilwane ufuna ukwazi kabanzi ngezinja zabo, mayelana nenhlalo yokulala kwezintandokazi zezinja zabo. Izikhundla zezinja zilala kuzo, futhi nesikhathi abasichitha belele kungenzeka kuveze okuningi ngokuthi bazizwa kanjani. Nazi ezinye izindawo zokulala ezivamile nokuthi zingasho ukuthini. Ngasohlangothini ...
Ingabe inja idinga ijazi ebusika
Ubusika buyeza kungekudala, Lapho sigqoka amapaki nezingubo zangaphandle zonyaka, nathi siyazibuza - ingabe inja idinga amajazi ebusika, futhi? Njengomthetho ojwayelekile, izinja ezinkulu ezinamajazi aminyene, aminyene zivikelwe kahle emakhazeni. Izinhlobo ezifana ne-Alaskan Malamute, iNewfoundlands, namaSkyeri Huskies, ane ...
Kungani izinja zidla utshani
Kungani izinja zidla utshani？ Uma uhamba nenja yakho, kwesinye isikhathi uzothola inja yakho idla utshani. Yize wondla inja yakho ukudla okunomsoco okugcwele konke abakudingayo ukuze bakhule futhi b ...
Indlela Yokunciphisa Izipikili Zekati Lakho
Ungazinciphisa Kanjani Izipikili Zekati Lakho treatment Ukwelashwa kwe-Nail kuyingxenye ebalulekile yokunakekelwa kwekati lakho njalo. Ikati lidinga izinzipho zalo ukusikwa ukuze zingagqabuki noma zaphuke. Kukhiqiza ukunciphisa izindawo ezibukhali zekati lakho ...
Ikheli:No.8 Nanguandu road, Yuexi Town, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu China